Raw JinYang Alkali (Jinyang Base) mmekọahụ ntụ ntụ | AASraw Mmekọahụ ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Nwoke Jiri / JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ ntụ
Categories: Nwoke Jiri, Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram na usoro nchịkọta nke JinYang Alkali (Jinyang Base) mmekọahụ ntụ ntụ, n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa njikwa.
JinYang Alkali (Jinyang Base) uzuzu uzuzu
JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ Characters:
aha: JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ
agba: Yellow ntụ ntụ
JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ ntụ eji mee ihe
JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ ntụ A na-akpọkwa isi dị ka JinYang Base.
JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ ntụ Usage
Ọ dịghị ngwaahịa aha nkọwa
1) Ihe Dị Mcha Dị Mkpa Bụ Oge Amalite Oge
Awa 1 60-80mg 1.5 awa 48-72
Awa 2 50-60mg 0.5 hour 48
Oge 3-80 100 0.5-24mg 36 hour XNUMX-XNUMX
2). Mmiri / mmanya Ihe ndị nwere ike ịme ka oge amalite
Awa 4 60-70mg 1 awa 48-60
3) Ụdị Ụdị
Were otu dịka ọmụmaatụ
Otu chemical dị irè na 10 dị iche iche nke ihe ọkụkụ dị iche iche:
Rhodiola Rosea PE Epeepe wepụ
Ịdọ aka ná ntị na JinYang Alkali ntụ ntụ
Mbelata obere, mmalite ngwa ngwa, ogologo ndụ na nchekwa. enweghị mmetụta ọ bụla, enweghị ike ijide ya. elu dị ọcha.
Ejaculation mgbochi bụ nsogbu nkịtị n'etiti ụmụ nwoke, nchọpụta na-atụ aro na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ikom na-ata ahụhụ site na mmekorita nwoke na nwanyị n'oge a ma ọ bụ ọzọ. Ọ bụ ihe a na-ejikarị emekarị karịa nrụrụ erectile (enweghi ike ịnọgide na-arụ ọrụ.
Maka ogwu, tinyekwa na ngwaahịa nlekọta ahụike na ihe ọṅụṅụ.
1) Aha aha: usoro nkwụsị nke erectile JinYang Alkali / Jinyang Base
2) aha Latin: JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ ntụ
3) Ihe na-arụ ọrụ: Herb Etract
4) Nkọwapụta: 99.8%
5) Ọdịdị: edo edo ntụcha
6) Okwu Mmalite:
JinYang alkali powder adabara maka ọgwụgwọ nke erectile dysfunction (ED), na ojiji nke antidepressants, antipsychotics na mgbochi hypertensive ọgwụ ọjọọ eme ka adịghị ike, ịwa ahụ ma ọ bụ post-traumatic akpata adịghị bụ nti.
Isi ntụ ntụ Jinyang bụ aha mpaghara na China. Ugbu a ọ bụ ihe ndị kachasị ewu ewu maka mbupụ maka nwoke.
Ka ọrụ emeputa n'ógbè a, Sonwu nwere ike inye ahịa dị iche iche na inwe mmekọahụ nkwalite materials.Now anyị bụ nnukwu emeputa na soplaya nke a usoro na PDE5 mgwa niile China.
Anyị rere ya n'ọtụtụ mba, dịka USA, UK, Sweden, Malaysia, Poland, na ihe ndị ọzọ. Ezi ahịa na-egosipụta mmetụta dị ebube. Naanị ịkpọtụrụ anyị n'enweghị ihe ọmụma.
JinYang Alkali ntụ ntụ
Jinyang isi ntụ ọka
III. JinYang Alkali (Jinyang Base) ntụ ntụ HNMR
IV. Esi zụta JinYang Alkali ntụ ntụ: ịzụta ụda isi nke Jinyang si AASraw?
AASraw na-enye 99% JinYang Alkali dị ọcha nri ntụ ntụ na nri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ candy, n'okpuruala labs maka ED / Erectile dysfunction ọgwụgwọ ....
JinYang Alkali ntụ ntụ Ezi ntụziaka
Mmezi nke nwoke na nwanyi mmekorita Raw Jinyang Alkali ntụ ntụ
Stenbolone ntụ ntụ (5197-58-0)